“Xisbi Inaan Galo Waxa Ka Horaysa Inaan Dadka Soo Arko. 18 May Aniga Waxay Ila Tahay Reer Somalilandnoow In Doodaasi Furanto” – | Berberatoday.com
“Xisbi Inaan Galo Waxa Ka Horaysa Inaan Dadka Soo Arko. 18 May Aniga Waxay Ila Tahay Reer Somalilandnoow In Doodaasi Furanto” –
Hargeysa(Berberatoday.com)-Prof Axmed Ismaaciil Samatar, ayaa khudbad uu xalay ka jeediyay xarunta dhaqanka iyo hidaha ee Hargeysa ku taala, wuxuu kaga hadlay amuuro badan.
Mar Prof Samatar wax laga weydiiyay is casilaadii uu kaga tagay guddigii aqoonsi raadiska ee uu Madaxweyne Siilaanyo ku daray wuxuu yidhi “Aniga caawa haddiiba magacaabistu ii imaan lahayd jawaabtaydii waxba kama beddeleen. Arrinta aqoonsigu Somaliland wadnahay kaga taala. Aqoonsiguna waa muhiim oo adduunyadu haddaanay inoo imaanayn waxba inoo qabanayn waa dhibaato. Waxaanan madaxda ku idhi waa in aynu kala saarna jibada iyo farsamo ahaan.. Waxa ila habboon baan ku idhi koomishan waa in la sameeyaa oo aanay inaga noqon hebel ku dara. Waa 2013 markaas taladaydiina lama qaadan oo 18 qof oo noc walba leh baa la magacaabay.
Prof Samatar, waxa wax laga weydiiyay maalinta qaranimada Somaliland ee 18 May oo uu hore uga yidhi hadal dood dhaliyay, waxaanu ku jawaabay “18 May Aniga waxay ila tahay reer Somalilandnaw in doodaasi furanto. 18 May qof aan waxba ogayn amma cudur ku jiraa dafiri kara, laakiin waxay ila tahay waa laga weyn yahay18 May waayo waxa ka fiican in 26 june dalka laga soo bilaabo waayo 18 may dabaro badan bay leedahay. Su’aasha taala waa sida la isagu keeni lahaa. Anigu 18 May way jirtaa baan leeyahay dad badan oo diidana way jiraan. Laakiin dooda aynu reer Soomaliya la gelayno iyo adduunyada 26 June baa muftaax u ah aqoonsiga.”
Ugu dambayn isagoo ka jawaabaya su’aal la weydiiyay wuxuu yidhi “Waxaan idhi madaxda Somaliland wali lagama qaadin imtixaanka ah sida dal loo hoggaaminaayo. Imtixaankaasna waa doorashada, umana jeedin madaxdu hoggaamin ma laha ee doorashadaan u jeedda. Dadka Somaliland waxay ku odhanayaan waad nagu soo noqnoqonaysaa maxaad noo haysa da’ baad joogtaa waxna waad baratay? Taasi waxay igu kaliftay inaan madaxda la sheekaysto markaan noqdana idhaa way kaas ee I naca. Waxa lagu caashaqsan yahay maalintaad kaligaa tidhaa laakiin halkanaan ka ciyaaraya bay ku nacayaan.”